Lathe စက်တွေဘာကြောင့်သုံးရတာလဲ? - လက်စွဲတွင်ခုံစက်, စီးပွားရေးဇုန် CNC တွင်ခုံစက်, မိုးသည်းထန်စွာ Duty Flat အိပ်ရာ CNC ခုံစက်ပစ္စည်းရေးစင်တာ
ကျော်လွန် 20 တရုတ်၏တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ခုံစက်ကိုဖြစ်စေနှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံကို
ဆဲလ်ဖုန်း / WeChat / WhatsApp ကို +86 13928187729
မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်ပြားချပ်ချပ်အိပ်ရာ CNC ခုံ
အနည်းငယ်တာဝန်စောင်းအိပ်ရာ CNC တွင်ခုံစက် Cent
နေအိမ် » Lathe စက်တွေဘာကြောင့်သုံးရတာလဲ?
400အိပ်ရာကို manual ခုံကျော်မီလီမီတာလွှဲ –1500မီလီမီတာစက်အရှည်
500အိပ်ရာကို manual ခုံကျော်မီလီမီတာလွှဲ –1000မီလီမီတာစက်အရှည်
800အိပ်ရာကို manual ခုံကျော်မီလီမီတာလွှဲ –1000မီလီမီတာစက်အရှည်
420အိပ်ရာ CNC ခုံကျော်မီလီမီတာလွှဲ –650မီလီမီတာစက်အရှည်
400အိပ်ရာ CNC ခုံကျော်မီလီမီတာလွှဲ –750မီလီမီတာစက်အရှည်
500အိပ်ရာ CNC ခုံကျော်မီလီမီတာလွှဲ –350မီလီမီတာစက်အရှည်
450အိပ်ရာ CNC ခုံကျော်မီလီမီတာလွှဲ –450မီလီမီတာစက်အရှည်
ကုမ္ပဏီလီမိတက်မြို့ဖွံ့ဖြိုးဆဲအဆင့်မြင့်နည်းပညာသောကွမ်ကျိုး Panyu ခရိုင်အတွင်းရှိတည်နေရာကွမ်ကျိုးတောင်ပိုင်းတွင်ခုံစက် Tools များ.
စက်တင်ဘာ 28, 2021
Lathe Machines ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ?
စက်တင်ဘာ 10, 2021
CNC lathe machine ဘာကြောင့်လိုအပ်ရတာလဲ?
သြဂုတ် 25, 2021
Lathe စက်တစ်လုံးလိုပါသည်? ဒီမှာမင်းလိုအပ်တာကဘာလဲ.
သြဂုတ် 17, 2021
Cylindrical Pieces များပြုလုပ်ရန် Lathe ကိုရွေးချယ်ပါ
သြဂုတ် 16, 2021
ကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးထုတ်ကုန်နှင့်အတူဖောက်သည်ပေးဖို့ကွိုးစား. တောင်းဆိုမှုသတင်းအချက်အလက်များ,နမူနာ & စြေးထား,ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!
ကွမ်ကျိုးတောင်ပိုင်းတွင်ခုံစက် Tools များကုမ္ပဏီလီမိတက် © 2021 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး အသုံးပြုမှုအသုံးအနှုန်းများနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ